Haezer Rakitsary Rakitsary - Famolavolana
Rakitsary Rakitsary I Haezer dia malaza amin'ny feony malefaka matevina, fiatoana mahery vaika misy voka-tsofina tsara. Ny karazana feo izay mandeha toy ny mozika dihy mahitsy fotsiny, fa rehefa mandinika akaiky na mihaino dia hanomboka hahita marobe matetika amin'ny vokatra vita ianao. Ho an'ny foto-kevitra famoronana sy fanatanterahana ny fanamby dia ny hanandramana ny traikefa amin'ny feo audio fantatra amin'ny anarana hoe Haezer. Tsy ny fombafomban'ny mozika dihy mahazatra no mampiavaka ny fomba kanto, ka mahatonga an'i Haezer ho karazany iray ho azy manokana.
Anaran'ny tetikasa : Haezer , Anaran'ny mpamorona : Chris Slabber, Anaran'ny mpanjifa : CS Design & Illustration.
Rakitsary Rakitsary Chris Slabber Haezer